Izindaba - Izimbangela nezindlela zokuvikela ukushelela kwebhande
1. Ukunganele kwebhande
Uma ibhande lingenakho ukungezwani okwanele, ngeke kube namandla okwanele okushayisana phakathi kwepulley yokushayela nebhande, futhi ngeke likwazi ukudonsa ibhande nokuhamba kokuhamba.
Idivayisi yokungezwani yokuhambisa ibhande imvamisa ifaka ukungezwani kwesikulufa, ukungezwani kokubacindezela, ukungezwani okukhulu kwesando nokungezwani kwemoto. Ukushaywa unhlangothi okwanele noma ukulungiswa okungafanele kwesikulufu noma okokuqina kwe-hydraulic tension, counterweight eyanele yedivayisi esindayo yokushuba kwesimo nedivayisi yohlobo lokuxakaniseka kwemoto, kanye nokuminyana kwendlela kuzodala ukungezwani okwanele kwebhande elihambayo futhi kubangele ukushibilika.
1) Ukuhambisa ibhande okunomoya ovunguzayo noma wokubacindezela okwenyukayo kungakhuphula ukungezwani ngokulungisa ukushayisana kwezingxabano, kepha kwesinye isikhathi ukushayisana okukhona akwanele futhi ibhande linokukhubazeka okungapheli. Ngalesi sikhathi, isigaba sebhande singanqanyulwa ukuze sisebenze futhi.
2) Ukuhanjiswa kwebhande okunesimo esisindayo sokungezwani kanye nokwakheka kwemoto kungalashwa ngokwandisa isisindo se-counterweight noma ukuqeda ukuminyana kwendlela. Kumele kuqashelwe ukuthi lapho kukhuphuka ukucushwa kwensimbi yokungezwani, kungangezwa ebhandeni ngaphandle kokushelela, futhi akufanelekile ukwengeza okuningi, ukuze ungenzi ibhande lithwale ukungezwani ngokweqile okungadingekile futhi kunciphise impilo yenkonzo yalo. .
2. Isigubhu sedrayivu sigqokwe kakhulu
Isigubhu sokushayela esihambayo sebhande ngokuvamile siphathwa ngokumbozwa ngenjoloba noma ngokujikijelwa, futhi kuzofakwa i-herringbone noma idayimane emgodini wenjoloba ukwenza ngcono ukungalingani kokukhula futhi kukhulise ukungqubuzana. Ngemuva kokugijima isikhathi eside, indawo yenjoloba kanye nomgodi wesigubhu sokushayela kuzogqokwa kakhulu, okuzonciphisa ukungalingani kokungqubuzana nokungqubuzana kobuso begqomu lokushayela futhi kudale ukuthi ibhande lishelele.
Isixazululo: uma kwenzeka kulesi simo, kufanele kusetshenziswe indlela yokugoqa kabusha noma yokufaka isigubhu kabusha. Ekuhloleni kwansuku zonke, kufanele kubhekwe ukuhlolwa kokugoqwa kwesigubhu sedrayivu, ukuze kugwenywe ukuthi ukugqokwa ngokweqile kungatholakali ngesikhathi, okwenza ibhande lishelele futhi kuthinte ukusebenza okujwayelekile.